राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक निर्वाचित हुनै पर्ने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक निर्वाचित हुनै पर्ने
बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०९:२२ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खसेको कुल मतको ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जित्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा बहुमतले यो प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
समितिका सदस्य रामेश्वर फुयाँलका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई उपसमितिले टुंगो लगाएर समितिमा पठाएको थियो । तर साना दलका सांसदहरुले भने यसको तीब्र विरोध जनाएका छन ।
फुयाँलका अनुसार निर्वाचनमा खसेको कुल मतमध्ये राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्तका लागि ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नैपर्ने हुन्छ । केही सांसदहरुले भने पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । साना दलका सांसदहरुले यसको विरोध गर्दै संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन ।
PREVIOUS POST Previous post: लाङटाङमा स्थानीय बासिन्दाद्वारा स्वास्थ्य र सुरक्षाको माग
NEXT POST Next post: एउटै प्रदेशमा तीन महानगरपालिका २ ओटाका लागि मापदण्ड नपुग्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०९:२२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०९:२२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०९:२२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०९:२२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, चैत्र ९, २०७३ ०९:२२